के पृथ्वीमा सुन सकिदै छ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार के पृथ्वीमा सुन सकिदै छ ?
के पृथ्वीमा सुन सकिदै छ ?
१० आश्विन २०७७, शनिबार २०:३०
सुनका गहनाहरू खरीद गर्दा, सुन कहाँबाट आउँछ, र यसको आपूर्ति सँधै जारी रहन्छ की रहदैन ? भन्ने बारे कतिपयले नसोचको पनि हुन सक्छ । गत महिना सुनको मूल्यमा रेकर्ड वृद्धि भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको भाउ प्रतिआउन्स (करिब २८.३५ ग्राम) २,००० डलर (नेपाली २ लाख ३५ हजार ९ सय ६३रुपैयाँ ) पुग्यो। गोल्ड स्थिति प्रतीकको रूपमा लगानीको लागि प्रयोग गरिन्छ र धेरै इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूमा प्रयोगको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । विज्ञहरूले उच्च उत्खनन बिन्दुको कुरा गर्छन् जब कुनै एक वर्षमा उत्खनन गर्न सकिने उच्चतम परिमाणमा सुन झिकिन्छ। कतिपय विश्वास गरेका छन्, संसार त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छ।
वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार २०१९ मा सुनको कुल उत्पादन ३ हजार ५ सय ३१ टन थियो जुन २०१८ भन्दा एक प्रतिशत कम रहेको जनाइएको छ। उत्पादन २००८ पछि सुन पहिलो पटक घटेको थियो।
विश्व गोल्ड काउन्सिलका प्रवक्ता हन्ना ब्रान्डसेटर भन्छन्, ‘सुन खानीबाटट आपूर्ति कम भइरहेको छ वा आउने वर्षहरूमा कम हुन सक्छ किनकि सुनको खानीहरू जुन अहिले पूर्ण रूपमा प्रयोग भइरहेको छ र नयाँ खानीहरू कम भइरहेको छ। तर त्यसोभए सुनको उत्पादन चरम शिखरमा पुगेको छ ।’विज्ञहरू भन्छन, ‘यदि (पीक गोल्ड)पनि आयो भने यस्तो हुँदैन कि सुनको उत्पादन धेरै चाँडै कम हुनेछ। यो गिरावट केहि दशकहरुमा बिस्तारै आउनेछ। कम्पनीहरूले दुई तरिकामा जमिन मुनि रहेको सुनको मात्रा अनुमान गर्छन्।’
रिजर्भ्स – अहिलेको सुनको भाउ अनुसार फाइदाजनक रूपमा निकाल्न सकिने सुनको परिमाण।
रिजोर्सेस – थप अनुसन्धानपछि उत्खनन गर्दा सम्भावित रूपमा फाइदाजनक हुनसक्ने सुनको परिमाण।
रिजोर्सेसभन्दा सुनको रिजर्भ्सको हिसाब निकाल्न सजिलो छ। अमेरिकाको भूगर्भीय सर्वेक्षण अनुसार, सुनको सञ्चय हाल ५० हजार टन छ। हालसम्म १ लाख ९० हजार टन सुन उत्खनन भइसकेको छ। अर्थात् लगभग २० प्रतिशत सुन बाँकी छ।
पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिहरूले थप परिमाणको सुनलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुनेगरी उत्खनन गर्न सकिने भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट खानी र ठूलो डाटा जस्ता नयाँ प्रविधिको सहयोगले सुन उत्खनन गर्न सकिन्छ । रोबोटहरू सुन उत्खनन गर्न धेरै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको विटवाटरस्रान्ड बेसिन सुन खानीको सबै भन्दा ठूलो खानी रहेको छ। विश्वको एकतिहाइ परिमाणको सुन त्यहाँबाट मात्र उत्खनन गरेर निकालिएको छ। अन्य ठूला खानीमा दक्षिण अफ्रिकाकै मपोनेङ खानी, अस्ट्रेलियाका सुपर पीट तथा बोडिङ्टन खानी, इन्डोनेशियाको ग्रास्बर्ग खानी तथा नेभाडा, अमेरिकाका खानी हुन्। अहिले विश्वमा सबभन्दा धेरै सुन उत्खनन गर्ने मुलुक चीन हो भने क्यानडा, रुस तथा पेरू पनि ठूला उत्पादक हुन्। कम्पनीहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो सुनखानी कम्प्लेक्स नेभाडा गोल्ड माइन्सको छ जसको बहुमत स्वामित्व ब्यारिक गोल्डसँग छ। नयाँ खानीहरू अब कमै फेला पर्न थालेका छन्। त्यसैले धेरै उत्पादन पुरानै खानीहरूबाट भइरहेका छन्।
चन्द्रमामा पनि सुन रहेको जनाइएको छ। तर त्यसलाई त्यहाँ उत्खनन गरेर पृथ्वीसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा उच्च लागत लाग्ने बताइएको छ। साथै एन्टार्टीका महादेशमा पनि केही सुनखानी रहेको बताइन्छ। त्यहाँबाट पनि उत्खनन गर्न अत्यन्त महँगो पर्छ।
हात्तीमाथि आगो आक्रमण : जलेर हात्तीको मृत्यु, दुई जना पक्राउ (भिडियाे)
भगवती आधारभुत विद्यालय दिच्यामको व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन